ဥုံဖွ - ပတ္တနိက္ကုဇ္ဇန (၂) - MoeMaKa Media
Home / Culture / Monk Boycott / Ohn Phwa / Saffron 1990 / ဥုံဖွ - ပတ္တနိက္ကုဇ္ဇန (၂)
ဥုံဖွ - ပတ္တနိက္ကုဇ္ဇန (၂)
(မိုးမခ) ဒီဇင်ဘာ ၁၇ ၂၀၁၉
(၂) - သမိုင်းဝင်ခဲ့တဲ့ ချစ်စရာ့မြတောင်
ဆရာတော်ကြီးတွေရဲ့ဆန္ဒတော်တွေနဲ့ ဩဝါဒတော်တွေကို လျှောက်ထား ဘို့ (ဗ.က.သ)ကျောင်းသားကြီးတွေဖြစ်တဲ့ ကိုခင်မောင်ညွန့်(ကိုကျားကြီး)၊ ကိုဇော်ဝင်းနိုင်(ကိုကုလားကြီး)၊ ကိုစန်းယု ခေါ် ဂွသခင်(သေဆုံး) တို့နဲ့အတူ ဘုန်းကြီးကောဆီ ရောက်သွားခဲ့ကြတယ်။ ဒီကျောင်းသားအဖွဲ့တွေထဲက တစ်ယောက် နှစ်ယောက်လောက်စီကို ဆရာတော်ကြီးတွေရဲ့သဘောထား တောင်းခံတဲ့အခါတွေနဲ့ ဩဝါဒ သွားပြီးခံယူတဲ့အချိန်မျိုးတွေမှာအလျဉ်းသင့်သလို ခေါ်သွားလေ့ ရှိတယ်။
သဘောကတော့ ဆရာတော်ကြီးတွေရဲ့ စိတ်နေစိတ်ထားအမှန်ကို သိစေလိုတဲ့အချက်ကြောင့်ရယ်၊ နောင်...ကိစ္စကြီးငယ်ရှိ လို့ သွားရ လာရ ဝင်ရ ထွက်ရချိန်မှာ သွားရဲ လာရဲရှိအောင်ဆိုတဲ့သဘောမျိုးနဲ့ပါ။ ဘုန်းကြီးကောကို ဆရာတော်ကြီးငယ်တွေရဲ့ ဆန္ဒ ဩဝါဒတွေကိုလျှောက်တင်အပြီး ပတ္တနိက္ကုဇ္ဇနကမ္မဝါ (သပိတ်မှောက်ကမ္မဝါ) ကိစ္စကို ဆက်မေးချိန်မှာ "ဒီကမ္မဝါကို ငါ စီစဉ်ပါ့မယ်၊ ဗလာစာအုပ်မှာလိုက်ရေးကြ"လို့ မိန့်ပြီး ပတ္တနိက္ကုဇ္ဇနနဲ့ပတ်သက်တဲ့ ဝိ နည်းပါဠိတော်တွေရှာ၊ ကမ္မဝါတွေနဲ့ နှီးနှောတိုက်ဆိုင်ပြီး ပါးစပ်နဲ့ နှုတ်တိုက်ဆိုပေး တယ်။ ဆရာတော်နှုတ်တိုက်ဆိုပေးတာကို ဦးသုစိတ္တလေး(ယခု ဦးသုစိတ္တာဘိဝံသ၊ မြောက်ဒဂုံမစိုးရိမ်တိုက်သစ်၊ မစိုးရိမ်တိုက်သစ်နာယကအဖွဲ့ဝင်)နဲ့ ဦးဉာဏိက (ယခု..အမေရိကန်၊ မုဒိတာရွှေကျောင်းဆရာတော်) တို့က လိုက်ရေးကြတယ်။
ကမ္မဝါရေးပေးအပြီး ပါလာတဲ့ကျောင်းသားတွေကို " မောင်ကျောင်းသားတွေကို မှာရဦး မယ်။ အခုလုပ်ခိုင်းတဲ့ကိစ္စက သေးသေးကွေးကွေးကိစ္စ မဟုတ်ဘူး၊ ဒီလိုပွဲမျိုး ကြုံရ ဘို့လဲ ခဲယဉ်းတယ်။ တစ်မြို့လုံးသိဘို့၊ တစ်နိုင်ငံလုံးသိဘို့၊ တစ်သာသနာလုံးသိဘို့ အရေးကြီးတယ်။ ဒီကိစ္စတွေကိုတော့ မောင်ရင်တို့ တာဝန်ယူရမယ်။ ပူးပေါင်းပြီးလုပ်သင့်တာ လုပ်ရမယ် " လို့ မှာတယ်။
ဒီလို မှာအပြီးမှာ မောင်စန်းယုက "ဆရာတော်၊ တပည့်တော်ကို လျှောက်ထားခွင့်ပြုပါဘုရား။ အကယ်၍ သပိတ်တားဘို့ဖြစ်လာရင် တပည့်တော်တို့လဲ ဦးဇင်းတွေနဲ့ တွဲပြီး တားခွင့်ရှိလားဘုရား" လို့ လျှောက်တော့
" အော်,အေး..တားခွင့် ရှိပါတယ်။ ဒါပေမယ့် သံဃာတွေ တားတဲ့နောက်ကနေ ဝမ်း လျားမှောက်ပေးပြီး တားရမယ်" လို့ မိန့်လိုက်တယ်။
ဆရာတော် အချောကိုင်ပေးလိုက်တဲ့ လက်ရေးမူကမ္မဝါကို သုံးနေကျကမ္မဝါမျိုး ဖြစ်အောင် ရိုက်ပေးဖို့ "သုခဝတီပုံနှိပ်တိုက်ပိုင်ရှင် ဦးစိန်တင်ဆီ အပ်လိုက်တယ်။ သူတို့ ရိုက်ပေးရမယ့်ကမ္မဝါဟာ စစ်အစိုးရကို သပိတ်မှောက်မယ့် ကံဆောင်ကမ္မဝါဆိုတာကို သိခဲ့မယ်ဆိုရင် လုံးဝ ရိုက်ပေးမှာမဟုတ်တာတော့ သေချာတယ်။ အစစ အရာရာ ဘာလုပ်လုပ် ကြောက်နေရတဲ့ခေတ်ပေကိုး။ ဒီသုံးနေကျ ကမ္မဝါမျိုးကို ရိုက်ရတာက
တော့ သိမ်ထဲမှာ ဝင်ရောက်ဖတ်ပေးမယ့် ဆရာတော်တွေ ခန့်ခန့်ထည်ထည်နဲ့ ကိုင်ပြီး ဖတ်စေလိုတာရယ်၊ သမိုင်းမှတ်တမ်း ကျန်စေလိုတာရယ်၊ နယ်က ဆရာတော်တွေကို သွားလျှောက်ရင် ဒီလိုမျိုးတွေ စီစဉ်ပြီး ကံဆောင်ခဲ့ပါတယ်ဘုရားလို့ လျှောက်ထားရ အောင်ဆိုတဲ့ ရည်ရွယ်ချက်တွေနဲ့ပေါ့။ အခမ်းအနား ကြွလာတဲ့သံဃာတွေလဲ ဆရာတော်တွေ သိမ်ထဲမှာ ရွတ်ဖတ်နေချိန်မှာ တပြိုင်တည်းရွတ်စေလိုတော့ ပုံမှာ ပြထားတဲ့
ကမ္မဝါစာရွက်လေးတွေကိုလဲ ရိုက်ပေး ဖြစ်ခဲ့တယ်။ ဒီဖယောင်းစာရွက် လက်ရေးကို ဦး ဉာဏိက(အမေရိကန်၊ မုဒိတာဆရာတော်)က ရေးပေးခဲ့တယ်။ ပွဲအပြီး မှတ်မှတ်ရရ သိမ်းထားပေမယ့် မစိုးရိမ်တိုက်ထဲ တပ်တွေ ဝင်ရောက်စီးနင်းချိန်မှာ အသိမ်းခံရတဲ့ထဲ ပါသွား၊ တခြားသူတွေကလဲ လက်ထဲမှာ တွေ့ရင် ဖမ်းခံထိမှာ ကြောက်တော့ မီးရှို့ဖျောက်ဖျက်ပစ်ကြတယ်။
ပထမပိုင်း ပို့စ် “နှလုံးလှသူများ၏ အဆုံးအမ” တင်လိုက်မှ ပထမဝေဠုဝန်ဆရာတော်က သမိုင်းမှတ်တမ်း တင်လောက်တဲ့ပွဲမို့ အဲဒီတုန်းက ကိုယ်တိုင်ကိုင်ပြီး ရွတ်ခဲ့ရတဲ့ ကမ္မဝါ သူ့ဆီမှာ ရှိတဲ့အကြောင်း မန့်ပြီး ပို့လိုက်လို့ ပြန်တွေ့ရတယ်။ အတော့်ကို ကျေးဇူးတင်မိတယ်။
နောက်တစ်နေ့ ဘုရားကြီးတိုက်က အလယ်တိုက်ကြီးမှာ နေ့ရာဒေသနဲ့ အချိန်သတ်မှတ်ဘို့ အစည်းအဝေးလုပ်ကြတယ်။ လေးပြင် လေးရပ်လို့ သတ်မှတ်ထားလို့ (၄)နေရာ ခွဲပြီး တပြိုင်တည်း လုပ်ဘို့ မိုးကောင်းဦးရေဝတ(မန္တလေး၊ လေးပြင်လေးရပ်သံဃသာမဂ္ဂီအဖွဲ့ချုပ်ဥက္ကဋ္ဌ)က အကြံပြုလာတယ်။ ဒီအကြံပြုချက်ကို မြတောင် ဦးအဂ္ဂဝံသ ( ဆရာတော် ဦးသာသနာဘိဝံသရဲ့တူအရင်း = ယခု စစ်ကိုင်း သီတဂူ ကိုအောင် သံပန်း၊သံတံခါး) ဦးဆောင်တဲ့ မြတောင်သံဃာတွေက နယ်မြေ ခွဲထားတဲ့အတိုင်းဆိုရင် တစ်နေရာနဲ့ တစ်နေရာ အဝေးကြီး သွားနေရမယ်။ အဝေးကြီး သွားရရင် အတားအဆီး ခံရနိုင်တယ်။ ဒီတော့ သံဃာအစုများတဲ့နေရာတွေ နီးစပ်ရာပေါင်းပြီး လုပ်ကြရင် မကောင်းဘူးလားဆိုပြီး အကြံပြုရင်း " တပည့်တော်တို့နဲ့ မစိုးရိမ်၊ မြတောင်၊ ဝိသုဒ္ဓါရုံစတဲ့တိုက် တွေ ပေါင်းမယ်။ တခါထဲ..မစိုးရိမ်က..နောင်တော်တွေကိုလဲ တောင်းဆိုချင်တယ်။ တပည့်တော်တို့ အစုအဖွဲ့ရဲ့ အခမ်းအနားကို တပည့်တော်တို့ မြတောင်မှာပဲ လုပ်ခွင့်ပေး
ပါ။ အခမ်းအနားအတွက် ကုန်ကျစရိတ်ကိုလဲ နောင်တော်တွေ တစ်ပြားမှ မထည့်ပါနဲ့၊ တပည့်တော်တို့ကပဲ တာဝန်ယူပါရစေ။ နောက်ပြီး..အခမ်းအနားပြင်ဆင်ဘို့ ကိစ္စကို နောင်တော်တို့ တိုက်ထဲမှာနေကြတဲ့ (ဗ.က.သ) ကျောင်းသားတွေနဲ့အတူ ပေါင်းလုပ်ရရင် အဆင်ပြေတယ်။ နောင်တော်ကြီးတို့ လာမနေကြနဲ့ ပင်ပန်းတယ် "ဆိုပြီး တင်ပြလာလို့ သဘောတူပေးခဲ့တယ်။ အမှန်အတိုင်းပြောရရင် ကိုယ်တွေကလဲ ထစ်ကနဲရှိ မစိုးရိမ်က ချည်းလို့ မထင်စေချင်ပဲ တစ်မြို့လုံး ညီညီညွတ်ညွတ်နဲ့ လုပ်ကြတယ်ဆိုတာကို သိစေ
ဒါနဲ့ပဲ ဦးရေဝတဦးဆောင်တဲ့ အိမ်တော်ရာအုပ်စုက မိုးကောင်းတိုက်မှာ၊ ဦးဓမ္မဝရ(သံဃသာမဂ္ဂီ ဒုဥက္ကဋ္ ဌ= ရဲဘက်စခန်းမှာ ပျံတော်မူ) ဦးဆောင်တဲ့ အရှေ့ပြင်အုပ်စုက အရှေ့ခင်မကန်တိုက်မှာ၊ ဦးခေမာ၊ ဦးဝါသဝနဲ့ ဦးဖိုးဆိုး (ဘုရားကြီးတိုက်၊ နယားဆရာတော်ကြီးရဲ့တူ)တို့ ဦးဆောင်တဲ့ တောင်ပြင်အုပ်စုက ဘုရားကြီးတိုက်မှာ၊ ဦးပဏ္ဍိ ( ရဲဘက်စခန်းမှာ ပစ်သတ်ခံရ)ဦးဆောင်တဲ့ မြောက်ပြင်အုပ်စုက တိုက်တော်တိုက်မှာ၊ မစိုးရိမ်၊ မြတောင်၊ ဝိသုဒ္ဓါရုံစတဲ့အုပ်စုက မြ တောင်မှာ ဆိုပြီး (၅) နေရာ (၅) ဌာနမှာ တစ်ရက်တည်း၊ တစ်ချိန်တည်းကျင်းပဘို့ ဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြတယ်။
အခမ်းအနားလုပ်မယ့် မနက်အစောမှာ ဗကသကျောင်းသားကြီးတွေက ကြုံတောင့်ကြုံခဲ သမိုင်းဝင်ပွဲကြီးမို့ ဗီဒီယိုနဲ့ မှတ်တမ်းတင်ချင်ပါတယ်ပြောပြီး ဗီဒီယိုရိုက်တဲ့စက် ကြီး လာပေးတယ်။ "ဟ...ဘယ်သူ့ဆီက မ..လာတာလဲ " မေးတော့ ပါလာတဲ့ လူကို လက်ညှိုးထိုးပြပြီး " သူ့ဥစ္စာပါ။ သူက မုံရွာ ဟိန္ဒူလူငယကျောင်းသားသမဂ္ဂကပါ။ နာမည်က ကိုရာကီးတဲ့။ သူ့အကိုတွေက "စန်းဦးဗီဒီယိုရိုက်ကူးရေး"ဆိုပြီး ထောင်ထား တယ်။ နောက်ပြီး..သူနဲ့က မန္တလေးတက္ကသိုလ်မှာ အတူ တက်နေတာ"လို့ ပြောပြီး ရိုက်တဲ့
နည်းပါ သင်ပေးတယ်။ ပြီးမှ "အော်,,အဓိကကျတဲ့ မှာဘို့ဟာကို မေ့နေတယ်။ ဒီ... အော်တိုမီးလေးကိုတော့ တဘက်နဲ့ အုပ်ပြီး ရိုက်ဘုရာ့။ ဒီလို အော်တိုရိုက်စက်က မန္တလေးမှာ (၃) လုံးပဲ ရှိသေးတယ်။ တော်ကြာ တယောက်ယောက်က တွေ့သွားရင်အော်တိုမီး မြင်ပြီး လာစစ်ရင် တခါထဲ မိသွားလိမ့်မယ်။ သံဃာတွေ ကြားထဲတော့ ဦးဇင်းတို့ပဲရိုက်၊ သိမ်ဝင်တဲ့အချိန်ကျမှ တပည့်တော်တို့ ဝင်ရိုက်မယ်" တဲ့။ တော်တော်ချစ်စရာကောင်းတဲ့ကျောင်းသားတွေ။
ပွဲနေ့ရောက်တော့ အခမ်းအနားမှာ ရိုက်တဲ့တာဝန်ကို ဦးနန္ဒာသီရိ = ယခု L.P.T. ဥက္ကဋ္ဌ နဲ့ ဦးအဂ္ဂဝံသ ( သီတဂူ ကိုအောင် သံပန်း၊သံတံခါး) တို့က ရိုက်ကူးပေးပြီး သိမ်တွင်း ကံဆောင်ချိန်မှာတော့ ကိုရာကီးနဲ့ ကိုစန်းယုတို့က မှတ်တမ်းတင်ပေးသွားပါတယ်။
အခမ်းအနားနေ့လဲရောက်ရော မြတောင်သံဃာတွေနဲ့ ကျောင်းသားတွေကို မချီးကျူးပဲ မနေနိုင်လောက်အောင်ကို ဖြစ်သွားတယ်။ သူတို့ ကတိခံထားတဲ့အတိုင်း ပြင်ဆင်ထား လိုက်တာ သာသနာ့အလံတွေကလဲ လွင့်လို့၊ မုခ်ဦးမဏ္ဍပ်ကြီးကလဲမြင့်လို့၊ ထိုးပေး ထားတဲ့စတိတ်စင်ကြီးကလဲ တင့်လို့၊ ကြိုဆိုရေးနဲ့ နေရာချထားရေးအဖွဲ့တွေကလဲ သင့်လို့ဆိုပြီး ပြောရလောက်အောင်ကို အကွက်စေ့စေ့လုပ်ထားတယ်။ တခြားနေရာတွေမှာတော့ မပြောတတ်ဘူး။ မြတောင်မှာလုပ်တဲ့ပွဲကတော့ သံဃာများ တဲ့ တိုက်တွေပေါင်းပြီးလုပ်တာမို့လို့လား? လမ်းသာလို့ပဲလား? မသိဘူး၊ စစ်အစိုးရ ဘက်က အတော်ကြီး ဂရုစိုက်တာ တွေ့ရတယ်။ ဘာလို့လဲဆိုတော့..အခမ်းအနားလုပ် မယ့် မြတောင်တိုက်ရှေ့က သာသနဗိမာန်မှာ ချထားတဲ့ စစ်သားတွေအပြည့်နဲ့ကားတွေ ရယ်၊ နံပတ်တုတ်တွေကိုင်ထားတဲ့ ရဲတွေရယ်၊ ဗိမာန်ပေါ်ကနေ အခမ်းအနားလုပ်မယ့်
နေရာကို မှန်ပြောင်းတွေနဲ့တစ်မျိုး၊ ဗီဒီယိုရိုက်စက်တွေနဲ့တစ်ဖုံ၊ ကင်မရာတွေနဲ့တစ်လီ လှမ်းရိုက်နေတာကို အခမ်းအနား စင်မြင့်ပေါကနေ တွေ့လိုက်ရလို့ပါခင်ဗျား။
ဥုံဖွ - ပတ္တနိက္ကုဇ္ဇန (၂) Reviewed by MoeMaKa on 8:00 AM Rating: 5